…त्यसपछि बिहे गर्छु भनेको प्रेमीले एउटा कोठामा लैजान्छन् त्यहाँ अरु युवा पनि हुन्छन्..! |
February 13, 2022 adminLeaveaComment on …त्यसपछि बिहे गर्छु भनेको प्रेमीले एउटा कोठामा लैजान्छन् त्यहाँ अरु युवा पनि हुन्छन्..!
कञ्चनपुरमा एउटी १४ वर्षकी बालिकालाई ६ जनाले एउटा कोठामा ५ दिन सम्म राखे । आफुले मन पराएको एक जना युवकले उनलाई बोलाएका थिए आफ्नै प्रेमीले बोलाएपछि नजाने कुरै भएन ।उनी गइन् । तर ति युवकको नियत भने अर्कै रहेछ । उनले एउटा कोठामा लैजान्छन् त्यहाँ अरु युवा पनि हुन्छन् । ५ दिन सम्म उनलाई औषधी खुवाउँछन् ।
त्यसैले उनले आफु माथि के भयो भन्ने पनि थाहा पाएकी छैनन्।अहिले उनका परिवारले ति युवकहरुबि’रुद्ध उजुरी दिएका छन् । ति युवतीलाई लगिएको ठाउँमा एक जना प्रहरी पनि थिए । उनका प्रेमीले फोन गरेर विवाह गर्ने भनेर बोलाए पछी आफु गएको ति बालिकाले बताएकी छन्।
परिवारका सदस्यले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सुरेश भन्ने प्रेमीले फोन गरेर बोलाएपछि आफु गएको बताएकी छन्। उनका बुवा आमा मजदुरी गरेर जिविका पाल्छन् उनी मामाघर बसेकी छन् ।ति सुरेशले म तिमीलाई विवाह गर्छु भनेर बोलाएपछि उनी पुलमा गएकी थिइन्।
कतिबेला आफुले थाहा पाउँदा अरु पनि आएको उनले बताइन् । कोठामा राखेको ५ दिनपछि उनीहरु आरामिल निर ल्याएर छोडिदिएको र त्यसबेला प्रहरीले आफुलाई फेला पारेको बताएकी छन् ।उनलाई भदौ १४ गते बोलाएर लिएर गएका थिए । त्यसको ५ दिन पछि प्रहरीले उनलाई फेला पारेको हो।
काठमाण्डौ देखी आयो डर लाग्दो खबर।काठमाडौं बासी खतरामा